Naqshadeynta - Joornaalka Naqshadeynta
Hadalka La Qaadan Karo Istiraatiijiyadda naqshadeynta Swiss BERNHARD | BURKARD waxaa loogu talagalay af-hayeen u gaar ah OYO. Qaabka uu u hadlayaa waa mid leh kaamil ah oo aan lahayn mawqif dhab ah. Hadalka BALLO ayaa dhigaya, duubmaya ama laalaadaya waayo-aragnimo muusig 360 ah. Qaabka ayaa raacaya mabaadii'da naqshada ugu yar. Suun midab leh ayaa geeya laba hemispheres. Wuxuu ilaaliyaa qofka hadlaya wuxuuna kordhiyaa codadka baashaalka markay dusha dul saaran yihiin. Hadal-hayuhu wuxuu la imanayaa batari Lithium oo dib loo soo celin karo isla markaana la jaan qaada qalabka maqalka badankood. Qalabka 3-aad ee loo yaqaan '3.5mm jack' waa mid caadi ah oo loogu talagalay dhegaha-dhegaha. Hadalka BALLO waxaa lagu heli karaa toban midab oo kala duwan.
Kuleylka Guriga Ee Shaqsiga Ah
Kuleylka Guriga Ee Shaqsiga Ah Thermostat for Smartphone wuxuu soo bandhigayaa waxoogaa yar, naqshad qurxoon, kaasoo ku xadgudbaya naqshadaha heerkul dhaqameedka. Halbeega translucent-ka wuxuu ka soo baxaa cad ilaa midab markiiba. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameysaa waa inaad dalbato mid ka mid ah 5 filim oo midabbo ah oo la isweydaarsan karo oo ku yaal dhabarka aaladda. Jilicsan iyo iftiin, midabku wuxuu keenaa taabasho jilicsan oo asal ahaan ah. Is dhexgalka jirka waa in laga ilaaliyaa ugu yaraan. Taabasho fudud ayaa u oggolaaneysa in la beddelo heerkulka halka dhammaan kontaroolada kale laga sameeyay taleefanka gacanta ee isticmaalaha. Shaashadda E-ink waxaa loo doortay tayadeeda aan wanaagsaneyn iyo isticmaalka tamarta yar.
Laambad Ilaha ilayska ee laambaddan gaarka ah waxaa lagu meeleeyaa bartamaha qaab dhismeedka guud, sidaa daraadeed waxay iftiimineysaa il fudud oo jilicsan. Meelaha iftiinka ah way ka duwan yihiin jirka guud ahaan sidaa darteed qaabka jirka oo fudud oo leh qaybo hoose oo lagu daro kaydinta tamarta iyada oo la adeegsanayo isticmaalka korantada yar ayaa siisa muuqaal dheeri ah. Sidoo kale jirka la taaban karo ee loogu talagalay inuu u rogo nalka ON ama XIDIGAHA waa muuqaal kale oo casri ah oo iftiinkaan u gaarka ah. Muujinta waxay keenaysaa kala duwanaansho nalalka iyo laambada laambadda ayaa la qorsheeyay. Nalalka badankood oo ka baxa laambada si uusan daawadayaashu uga faa'ideysan laambada ayaa dhalaali doonta. Nolol qurux badan.
Bangiga Doofaarka Shaygu waa bangi doofaar ah. Muuqaalka muuqaalka gaarka ah ee muuqaalka leh wuxuu isku daraa qaali qaali ah, dahab qaali ah ayaa leh astaamo la jecel yahay oo nooc ah iyo joogitaanka joogtada ah ee xubnaha qoyska, lacag uruurintu waa guryo aad u shaqeynaya. Laakiin muujinta ugu wanaagsan ee DeePee - oo dhan marka lagu daro shaqooyinka caadiga ah ee sida saxda ah u buuxiyo - waa in ereyada cusub, mid gaar ah oo iswaafaqsan guud ahaan loo yaqaan "dahabka" dhammaan guryaha gaarka loo leeyahay.
Haysta Mindida Laga soo bilaabo qarnigii laba iyo tobnaad garbadihii ugu horreeyay ayaa loo diiwaangeliyay ficil ama muuqaal dadweyne. Maanta miyir-qabka dadku wuxuu astaan u yahay qiimeyn guud oo caalami ah, ka-qeyb-qaadashada dabeecadda rabbaaniga ah, innaga ayaa ah guud ahaan. "Kaliya Xuquuqda Kaliya" halkan waxay ka dhigan tahay marxalad cusub, halkaas oo ay ka jiri doonaan nabaad-guurka waxqabadyada qallafsan, ee lagu dhexjiray wixii mar ahaan jiray xaflad dhaqan, iyo tallaabada weyn ee isbeddelka heerka aadanaha.
Nalalka Sii Kordhaya
Nalalka Sii Kordhaya Mashruucu wuxuu soo jeedinayaa in la taageero adeegsiga cusub ee bixiya khibrad cunto karinta oo dhan ah. Beerta loo yaqaan 'BB Little Garden' waa laambad ifaya oo ifaysa, oo doonaysa inay dib ugu laabtaan meesha dhirta dhirta udgoon leh gudaha jikada. Waa mug leh xariiqyo waadix ah, oo ah shey runtiisu yartahay. Naqshadda gacmo-gashi ayaa si gaar ah loo bartay si ay ula qabsato deegaanno kala duwan oo gudaha ah oo si gaar ah loogu qoro jikada. Beerta yar ee loo yaqaan 'BB Little Garden' waa qaab dhismeedka dhirta, khadkiisa saafiga ah ayaa weynaa iyaga mana carqaladeyso aqrinta.
Hadalka La Qaadan Karo Kuleylka Guriga Ee Shaqsiga Ah Laambad Bangiga Doofaarka Haysta Mindida Nalalka Sii Kordhaya